mercredi, 15 janvier 2020 20:54
Oniversiten’i Toamasina: Miato mandritran’ny fotoana tsy voafetra ny asa fampianarana sy ny fanadinana
Nanao fanambarana ny SECES Toamasina androany 15 janoary 2020, taorian’ny fivoriana nataon’izy ireo tao Barikadimy, mampahafantatra ny mpitondra fanjakana, Ray amandrenin’ny mpianatra ary ny mpianatra fa « miato tanteraka mandritran’ny fotoana tsy voafetra ny asa fampianarana sy ny fanadinana eto anivon’ny oniversiten’i Toamasina ».
Nilaza ny fanambarana fa tapitra androany 15 janoary 2020 ny fe-potoana nomen'ny sendikalin’ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra ny fitondram-panjakana makasika ny famahana olana momba ny fitakiana ireo teboka fito kanefa hatramin’izao dia « manao bemarenina sy tsy miraharaha » ity farany, ka noho izany dia « mitohy ary mihamafy ny tolona », hoy ny SECES Toamasina.
mercredi, 15 janvier 2020 20:48
Vondrombahoakam-paritra: Kaominina miisa 24 no hamerenana fifidianana
Kaominina miisa 24 manerana ny Nosy no hamerenana fifidianana taorian’ny didy navoakan’ireo Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana miisa enina eto Madagasikara. Ny 15 amin’ireo Kaominina ireo dia sady averina ny fifidianana Ben'ny tanàna no averina ny fifidianana Mpanolotsaina ; ny 9 kosa dia fifidianana Ben'ny tanàna ihany no averina.
Eo ihany koa ireo Kaominina miisa 8 izay tsy naharaisana antotan-taratasy firotsahan-kofidiana mpanolontsaina ka tsy maintsy anaovana fifidianana.
Raha ny voalazan’ny lalàm-pifidianana dia ao anatin'ny 120 andro aorian'ny haharaisan'ny Ministeran’ny Ati-tany ny fampahafantarana avy amin’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny Fanjakana no anaovana ny fifidianana.
Hotanterahina ny 9 janoary ka hatramin’ny 6 febroary 2021 ny dingana famaranana amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika amin’ny baolina kitra, na ny CAN 2021, izay hatao any Cameroun.
Vanimpotoanan’ny orana ny jona sy jolay any Cameroun, tsy toy ny tany Egypta ny taona 2019, ka izay no nandrosoana azy ho janoary-febroary, araka ny tapaka nandritra ny dinika nifanaovan’ny mpitondra any Cameroun sy ny mpitantana ny Kaonfederasiona afrikana amin’ny baolina kitra (CAF) tao Yaoundé, androany 15 janoary 2020.
mercredi, 15 janvier 2020 19:24
Jono: Mitaky ny hamerenana Ministera manokana
Nametraka sorabaventy teo amin’ny toeram-piasany eo Ampandrianomby Antananarivo, ny mpiasan’ny foibem-pitondrana ankapobeny momba ny jono sy ny harena an-dranomasina, eo anivon’ny Ministeran’ny fambolena sy fiompiana ary ny jono, mitaky ny hamerenana ny ministeran’ny jono.
Tsy ampy fitaovana hiasana toy ny solosaina, fiara, nanjary mitarazoka ny asam-panjakana satria raha iray ihany dia ahavitana mikarakara fahazoan-dalana hanjono teo aloha dia lasa roa herinandro izany vao vita ankehitriny, hoy ny mpiasa noho io fanovana natao io, ary tena zava-doza dia nihena hatrany amin’ny 50% ny fampidiram-bola amin’ny kitapombolam-panjakana satria raha nampiditra 8 miliara Ariary mahery 2018 dia tsy misy afa-tsy 4 miliara izany tamin’iny 2019 iny, hoy hatrany ny mpiasa ka mangataka ny mpiasa mba handiniana akaiky ny toe-draraha mba tsy hahapotika ny seha-pihariana jono.
mercredi, 15 janvier 2020 16:00
Antoko AKFM: Nodimandry i Eric Rakotomanga, filoha nasionaly
Nindaosin’ny fahafatesana, androany, teo amin’ny faha-65 taonany i Eric Rakotomanga. Filoha nasionalin’ny antoko AKFM, mpikambana teo anivon’ny CST (Conseil Supérieur de la Transition) ary tonin-dahatsoratry ny gazety Imongo Vaovao.
Hatao ny zoma 17 janoary 2020 ny fandevenana ny nofomangatsiakany eny amin’ny fasan-drazany Manjaka Ilafy, Antananarivo Avaradrano.
mercredi, 15 janvier 2020 15:57
Dadi Love: Nizara tsiky sy nanolotra fanampiana ho an’ireo marary tsaboina ao amin’ny hopitaliben’Antsohihy
Tanàna nahaterahan’i Dadi Love, mpanakanto, i Antsohihy. Nandalo aty an-toerana izy mivady amin’izao taona vaovao, ary mahatsiaro manokana ireo marary tsaboina ao amin’ny hopitaliben’Antsohihy, nanome hery azy ireo sy nanolotra izay voatsirambin’ny tanana.
« Tao ny nitomany amin’ny haravoana, tao no nitsiky an-kafaliana, tao ny marary tafapetraka tampoka tsy tadidiny intsony hoe marary izy noho ny hafaliana satria mahatsapa fa manana havana marina izy ireo izay tsy manadino », hoy i Dady Love.
« Tsoriko fa tsy hieritreritra tambiny amin’ny soa izay ataoko amin’ny mpiara-belona amiko ny tenako fa maimaimpoana ny fanomezan’Andriamanitra ny talenta ananako izay ahazoako vola, ka tsy tokony hahafaty antoka ahy mihitsy ny hanampy ny hafa amin’izay kely ananako, ka mivavaka ho azy ireo mba ho sitrana soaman-tsara », hoy hatrany ity mpanakanto ity tao amin’ny pejiny facebook.
Fenoarivo Atsinanana: Hanampiana ny famokaran-drano
Hakarina ho 2 184m3 isan’andro ny famokaran-drano ho an’i Fenoarivo Atsinanana, raha toa ka 507m3 isan’andro izany amin’izao fotoana izao. Misy ny tetikasa fanamboarana tohodrano avy amin’ny reniranon’Itendro hanampiana ny famokaran-drano ho an’i Fenoarivo Atsinanana, izay fiaraha-miasan’ny JIRAMA sy ny fikambanana GRET.
Efa nanomboka tamin’ny 12 desambra 2019 ny asa, ka tokony ho vita ny 30 aprily 2020 raha ny tetiandro.